Madaxweynaha Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ashtako laga gudbiyay [Sawir hore]
HARGEYSA, Somaliland - Maamulka Somaliland ayaa ku dhawaaqey in dacwad ka dhan ah Madaxweynaha Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas u gudbiyey Beesha Caalamka, kadib markii dhawaan socdaal ku tagey gobolka Sanaag.
Somaliland oo mudooyinkii ugu dambeeyay cabasho ka muujinaysey booqashadii Cabdiweli Gaas ku tegay magaalada Badhan, iyadoo hogaamiya-yaasha maamulkan [Mucaarad iyo Muxaafid] si aad ah u cambaareeyeen safarkiisa.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Somaliland, Sacad Cali Shire, ayaa shaaciyey in xudunta tabashoodu ay tahay in Cabdiwali Gaas uu kusoo xadgudubey Sohdinta maamulkiisa ee gobolka Sanaag.
Safarka Gaas ayuu tibaaxay wasiirka inay sarre u qaadi karto xiisad dhanka dhulka ah oo udhaxeysa Somaliland iyo Puntland, taasoo ay ku geeryoodeen Askar, ayna ku barakaceen dad badan.
"Waxaanu beesha caalamka ugudbiney cabasho ka dhan ah maamulka Cabdiwali Gaas. Waxaana ka dhigeynaa inay safarada ceenkaan ah ay kordhiyaan xiisadaha labada dal," ayuu yiri wasiir Sacad.
Isaga oo hadalkiisa sii wata ayuu afka ku balaariyey Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliland in maamulkiisu ka go'an tahay nabad kuwada noolaanshahaha Bulshada deriska la leh.
Somaliland iyo Puntland waxaa ka dhaxeeya colaad soo jireen ah oo ku saleysan is-qabqabsi dhuleed, taasoo keentey dagaal culus oo dhex-mara, taasoo ay ku naf-waayeen Tobaneeyo Askar.
Bishii Janaayo ayey ahayd markii ciidamada Somaliland ay kala waregeen kuwa Puntland gacan ku haynta tuulada Tukaraq ee gobolka Sool, taasoo keentey inay sii labo-jibaaranto xiisadda labada dhinac.
Siyaasiyiinta iyo madaxda maamulka Somaliland oo si kulul uga hadlay socdaalka Gaas ee gobolka Sanaag ayaa si adag ucambaareeyay, iyaga oo ku sifeeyay talaabada Gaas daan-daansi dagaal.
Madaxwayne Gaas oo uu mudada xileedkiisu yahay gabaabsi ayaa Puntland tan iyo markii uu xafiiska la wareegay geliyey dhowr dagaal, taasoo ay ku baxday lacag badan, ayna ku dhinteen Askar tiro ah.
Xiriirka dowlada Farmaajo iyo maamulka Biixi ayaa xumaaday kadib shaqaaqadii Tukaraq.